Isobar (အိုင်ဆိုဘား) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Isobar (အိုင်ဆိုဘား)
Isobar (အိုင်ဆိုဘား) ကဘာလဲ။
Generic Name: Isobar (အိုင်ဆိုဘား) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Isobar (အိုင်ဆိုဘား) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Isobar® ကို သွေးတိုးခြင်းကို ကုသရန် သုံးပြီး လေဖြတ် ခြင်း၊ ရုတ်တရက် နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းခြင်း နှင့် ကျောက် ကပ်ရောဂါများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဤဆေးကို triamterene နှင့် hydrochlorothiazide တို့ဖြင့် တွဲဖက် သုံးစွဲသည်။ ၎င်းသည် ဆီးပိုသွားစေ၍ ခန္ဓါကိုယ်မှ ပိုနေသော ဆားနှင့် ရေကို စွန့်ထုတ်ပေးသည်။
Isobar® သည် နှလုံးရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ သို့မဟုတ် ကျောက်ကပ်ရောဂါ ကြောင့်ဖြစ်သော ခန္ဓါကိုယ်တွင် အရည် များပိုလျှံခြင်းကို လျော့ချပေးသည်။ အသက်ရှူ မြန်ခြင်း၊ ခြေကျင်းဝတ် သို့မဟုတ် ခြေထောက် ဖောရောင်ခြင်းစသော လက္ခဏာများကို လျော့နည်းစေသည်။
Isobar (အိုင်ဆိုဘား) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ပါးစပ်မှသောက်ပါ။ များသောအားဖြင့် မနက်တွင် တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် သောက်ပါ။ အစာဖြင့် တွဲ၍ သို့မဟုတ် အစာမပါဘဲ သောက်နိုင်သည်။ ဆီးထသွားရခြင်း မဖြစ်စေရန် မအိပ်ခင် ၄ နာရီအတွင်း ဤဆေး ကို မသောက် ပါနှင့်။
သင်သည် ကိုလက်စထရောကို ချပေးသော ဆေးများ ( ဥပမာ- cholestyramine သို့မဟုတ် colestipol ) သောက်နေရပါက ထိုဆေးများမသောက်မီ အနည်း ဆုံး ၄ နာရီ တွင် Isobar® ကိုသောက်ပါ။ သို့မဟုတ် ထိုဆေးများ သောက်ပြီး အနည်းဆုံး ၄-၆ နာရီကြာမှ Isobar® ကိုသောက်ပါ။
ဆေး၏ အကျိုးကျေးဇူး အများဆုံးရရန် ဆေးကို ပုံမှန် သောက်ပါ။ မှတ်မိစေရန် ဆေးကို နေ့စဉ် တစ်ချိန် တည်းမှာ သောက်ပါ။ သင် သက်သာသွားသော်လည်း ဤဆေးကို ဆက်သောက်ရန် အရေးကြီးသည်။ သွေးတိုးသော လူအများစုသည် မဖျားနာပါ။
Isobar (အိုင်ဆိုဘား) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Isobar® ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်အလင်း နှင့် စိုထိုင်းမှုတို့မှ ကင်းဝေးအောင် သိမ်းဆည်းရမည်။ ဆေးပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Isobar® ကို ရေချိုးခန်း သို့မဟုတ် ရေခဲ သေတ္တာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။
Isobar® တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ဆေး၏ ဘူးကို အမြဲစစ်ရန် အရေး ကြီးသည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရောင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးများအားလုံးကို ကလေးနှင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာနေရာတွင် ထားပါ။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Isobar® ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Isobar (အိုင်ဆိုဘား) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဤဆေး မသောက်မီ အောက်ပါတို့ ရှိပါက ဆရာဝန်အား ပြောပါ။
သင်သည် triamterene သို့မဟုတ် hydrochlorothiazide နှင့် ဓါတ်မတည့်ပါက
သင့်တွင် အခြား ဓါတ်မတည့်မှုများ ရှိပါက
သင်သည် ဆီးချိုသွေးချို၊ ဒူလာရောဂါ၊ သွေးတွင်း ပိုတက်ဆီယမ် ပမာဏများခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ( ကျောက်တည်ခြင်း)၊ အသည်းရောဂါ၊ Lupus စသည် တို့ ဖြစ်ဖူးပါက
ဆရာဝန်က သင့်ခန္ဓါကိုယ်သည် အချို့သကြားများကို လက်မခံ နိုင်ပါဟု ပြောထားပါက ဤဆေးမသောက်မီ ဆရာ ဝန်အား ဆက်သွယ်သင့်သည်။
အောက်ပါ အခြေအနေများတွင် Isobar® မသုံးသင့်ပါ။
အသည်းကြောင့် ဦးနှောက် ထိခိုက်ခြင်း
Sulfonamide နှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
Triamterene နှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
အခြား ပိုတက်စီယမ် ချွေတာသော ဆီးဆေးများ သို့မဟုတ် ပိုတက်စီယမ် ဆားများနှင့် တွဲသုံးခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Isobar (အိုင်ဆိုဘား) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Isobar (အိုင်ဆိုဘား) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆေးများအားလုံး နည်းတူ Isobar® သည် အောက်ပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အရေပြားတွင် ဓါတ်မတည့်သော တုံ့ပြန်မှုများ
Disseminated lupus erythematosus ပိုဆိုးလာ ခြင်း
အရေပြား သွင်ပြင် ပြောင်းလဲခြင်း
ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်း၊ အရိုးများ မလှုပ်နိုင်ခြင်း
Acute nephritis ( အလွန်ရှားသည်)
သရက်ရွက်ရောင်ခြင်း ( အလွန်ရှားသည်)
ဘယ်ဆေးတွေက Isobar (အိုင်ဆိုဘား) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Isobar® သည် လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။
ပိုတက်စီယမ် ပမာဏကို မြင့်စေနိုင်သော အခြား ဆေးများ ( ဥပမာ- spironolactone, amiloride, cyclosporine)
ချောင်းဆိုး အအေးမိပျောက်ဆေး၊ အစာခြေဆေး၊ ibuprofen, naproxen စသော စတီးရွိုက် မပါသော အရောင်ကျဆေးများ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Isobar (အိုင်ဆိုဘား) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Isobar® သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Isobar (အိုင်ဆိုဘား) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Isobar® သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေ အနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။ သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Isobar (အိုင်ဆိုဘား) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဆေးပမာဏသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေနှင့် ကုသမှုအား တုံ့ပြန်ချက် အပေါ် မူတည်သည်။
ဆေးပမာဏသည် တစ်နေ့လျှင် ဆေး တစ်ခြမ်းမှ တစ်လုံး ဖြစ်သည်။
ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်များကို တိကျစွာ လိုက်နာပါ။
ကလေးတွေအတွက် Isobar (အိုင်ဆိုဘား) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Isobar (အိုင်ဆိုဘား) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Isobar® ကို အောက်ပါ ပုံစံ၊ ပြင်းအား များဖြင့် ရနိုင်ပါ သည်။
ဆေးတစ်ပြားတွင် Methyclothiazide ၅ မီလီဂရမ်။ Triamterene ၁၅၀ မီလီဂရမ် ပါဝင်သည်။
Isobar® သောက်ရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် သောက်ပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်ရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်ပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မသောက်ပါနှင့်။
Triamterene-Hydrochlorothiazide.http://www.webmd.com/drugs/2/drug-3154/triamterene-hydrochlorothiazide-oral/details#uses.Accessed October 23, 2016.
ISOBAR®.https://www.chiesi.fr/img/prodotti/documenti/Isobar.pdf.Accessed October 23, 2016.
Isobar®. http://www.medicatione.com/?c=drug&s=Isobar&ingredient=methyclothiazide/triamterene.Accessed October 23, 2016.
Isobar®.http://drugs-about.com/drugs-i/Isobar.html. Accessed October 23, 2016.